कमल थापा भर्सेस राजेन्द्र लिङ्देन : को बन्ला राप्रपा अध्यक्ष?
काठमाडौंः पटक-पटक विभाजनबाट गुज्रिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल एक राजतन्त्रवादी र हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल हो। यसलाई पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दद्वारा गठन गरिएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत समाप्तपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय थापा र चन्दले यसको नेतृत्व पटक–पटक गरिसकेका छन्।
राप्रपाका शीर्ष नेताहरुका अनुसार यो पार्टीलाई पञ्चायतकालको सत्तारुढ कुलीन वर्गले २०४७ साल जेठ १५ गते गठन गरेका थिए। २०४८ मा पार्टीमा आएको प्राविधिक मतभेद्का कारण यो विभाजित हुन पुगेको थियो। दुई पार्टी एकै नाम, विचारधारा र विधानको साथ अस्तित्वमा आएका थिए। सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्व र अर्का नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वको पार्टीले आम निर्वाचन २०४८ मा सहभागी भएका थिए। तर, यो पार्टीको इतिहास हेर्दा अहिलेसम्म पाँच पटकभन्दा बढी विभाजन भइसकेको छ।
राप्रपाले आजदेखि काठमाडौंमा एकताको महाधिवेशन आयोजना गरेको छ। यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। एकता महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वका लागि दुई जना आकांक्षी देखिएका छन्। हालका अध्यक्ष कमल थापा र पार्टीका पूर्वमहामन्त्री एवं सांसद् राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन उम्मेदवारी दिँदैछन्।
नेताहरुले भने सर्वसहमतिको प्रयास गर्ने बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले आज उद्घाटन सत्रमै पार्टी नेतृत्वका लागि सर्वसहमतिको प्रयास गरिनुपर्ने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म त्यस्तो प्रयास नभएको उनले बताए।
एक नेताका अनुसार लिङ्देनलाई पार्टी अध्यक्ष राणा र अर्का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको समर्थन छ। महाधिवेशनको अघिल्लो दिन पार्टी अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले लिङ्देनलाई नेतृत्वका लागि समर्थन गरेका थिए। यसअघि राणा र लोहनीले अध्यक्षको उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका थिए।
विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा थापा अध्यक्ष हुँदा राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू धर्मको नारामा राम्रो जनमत पाएको थियो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रकै नारामा दोस्रो पटक २५ सिटमा उक्लिएको थियो।
तर पछिल्लो समय कमल थापालाई हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको नारालाई राम्ररी पक्रन नसकेको आरोप छ। त्यही भएर पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अध्यक्षका लागि लिङ्देनलाई ‘ग्रिनसिग्नल’ दिएको बताइएको छ।
मुख्यतः कमल थापाले नेतृत्व गर्न नसकेको र पार्टीको एजेण्डा स्थापित गर्न सक्रिय भूमिका नखेलेको भन्दै लिङ्देनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। कमल थापाले अन्तिमपटक अध्यक्ष हुन चाहेको बताउँदै आएका छन्। उनले आफूलाई एकपटक ‘टेस्ट’ गर्न कार्यकर्तामाझ अनुरोध गरेका छन्।
कसको कुन पदमा चर्चा?
अध्यक्ष थापा पक्षबाट उपाध्यक्षमा ध्रुवबहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, जयन्त चन्द, रोशन कार्कीलगायतको नाम चर्चामा छ। पार्टी विधानमा राप्रपामा एक महिलासहित तीन उपाध्यक्ष रहने उल्लेख छ।
लिङ्देन पक्षबाट जगत गौचन, दुर्गा श्रेष्ठ, श्याम तिमिल्सिनाको नाम उपाध्यक्षमा चर्चा छ। महामन्त्री पदमा गोविन्द खनिया, धवलशम्शेर राणा र रेखा थापा आकांक्षी छन्। राप्रपामा एक सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये एक सय ४९ जनाका लागि निर्वाचन हुँदैछ।
सहमहामन्त्री ७ जना, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता पनि निर्वाचित अध्यक्षबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ। बिहीबार मतदानको तयारी छ।
६ मिनेटको कांग्रेस बैठकमा के-के भयो ?
सर्वोच्चले घटायो बाराका उमाशंकरको धरौटी
प्रचण्ड र माधव नेपाललाई महेश बस्नेतले दिए यस्तो चुनौती
यी हुन् काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य,शेखर कोइराला समेटिए ?
वडा कार्यालयको ५३ लाख कता गयो ? भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिए कर्मचारी
भीम रावलका मानिस होइनन्, बिकुवा माल हुन्, लोकतन्त्रका मुसा हुन् – एमाले नेता कर्ण थापा